Ambovombe Androy sy Amboasary Atsimo Nampitomboina ny isan’ny mpitandro filaminana
Noraisin’ny Fiadidian’ny Zandary ny fepetra ifehezana ny sisin-tany ifandraisan'ny distrikan'Ambovombe amin'ny distrikan'Amboasary Atsimo, izay kizo ivezivezen’ny omby halatra hifanakalozan’ireo distrika ireo.
Tsy ampy ny mpitandro filaminana tamin’ny toby iadiana amin’ny asan-dahalo tamin’ny fitondrana teo aloha. Mitohy ny ezaka ataon'ny Zandarimaria amin'ny fametrahana fandriampahalemana sahaza ny vahoaka. Mifantoka amin'ny asa fisorohana ny trangana asan-dahalo mba ahafahan'ny vahoaka miaina sy miasa am-pitoniana, fa tsy voatery hisy halatr'omby vao hanara-dia. Nampiana ny isan'ireo Zandary izay miantsehatra amin'iny faritra avaratra atsinanan'i Ambovombe manoloana ny tebitebin'ny mponina.
Ankoatra ny Zandary avy ao amin'ny USAD izay efa ao Antevamena, kaominina Imanombo dia nasiana « Postes fixes » ihany koa ny ao amin'ny kaominina Ambinagny sy ao amin'ny fokontany Vohitsova, kaominina Antanimora Sud. Nametrahana Zandary avokoa ny kizo ao amin'ny fokontany Saresanga, Andamilamy samy kaominina Ambovombe ary nametrahana «Poste fixe» ihany koa ny ao amin'ny kaominina Anjeky Ankilikira. Tsapa fa faly tokoa ny mponina any an-toerana mahatsiaro voaaro, izay miara-misalahy miaro ny tanàna sy ny kijàna.